စွဲမက်ဖွယ် ခန္ဓာကိုယ်လေးကို အပီအပြင်လှုပ်ခါပြီး ပုရိသတွေကို ညို့ယူလိုက်ပြန်တဲ့ ပိုပို ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Real Link
စွဲမက်ဖွယ် ခန္ဓာကိုယ်လေးကို အပီအပြင်လှုပ်ခါပြီး ပုရိသတွေကို ညို့ယူလိုက်ပြန်တဲ့ ပိုပို ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
ပရိသတ် တွေ ရဲ့ အချစ်တော် အဆိုတော် မ လေး ပိုပို က တော့ ပရိသတ် တွေ အကြိုက်တွေ့ စေတဲ့ သီချင်းကောင်း လေး တွေ များစွာ ထွက်ရှိ ထား ပြီး လက်ရှိ မှာ လည်း သီချင်းလေး တွေ ဆက်တိုက် လုပ်ဆောင် နေ ပါ တယ်နော်..။ သီချင်းလေး တွေ ကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီး ရေးစပ် ကာ အသံချိုချို လေး နဲ့ ဖျော်ဖြေ တတ် တဲ့ ပိုပို က တော့ သရုပ်ဆောင် ပိုင်း မှာလည်း ပရိသတ် တွေ ကို အချစ် ပိုစေ သူလေး လည်း ဖြစ်ပါ တယ် နော်..။
Tik Tok ဗီဒီယိုလေး တွေ ကို လည်း မကြာ ခဏ ဆော့ကစား တတ် တဲ့ ပိုပို က တော့ ပရိသတ် တွေ အတွက် အမြဲ မျှဝေ လေ့ရှိ သ လို အခုတစ်ခါ မှာ လည်း သူမရဲ့ ချစ်စရာ Tik Tok Video လေး ကို ဝေမျှ ထား ပါ သေး တယ် နော်..။ သူမ ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု လေး တွေနဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေ ကို အမြဲမျှဝေ တတ် တဲ့ ပိုပိုက တော့ အခု တစ်ခါ မှာ လည်း အထာ ကျကျ အမိုက်စား လေး ဓာတ်ဖမ်း ထား တဲ့ သူမ ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ နဲ့ ဖမ်းစား လိုက်ပြန် ပါ တယ်နော်..။
“ Red. . . ” ဆိုပြီး သူမ ရဲ့ ညို့အားပြင်း အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေ ကို ပိုပို က ချစ် ပရိသတ် တွေ ကို ဝေမျှ ထား တာ ဖြစ် ပြီး ပရိသတ် တွေလည်း သဘောကျ နေကြ မှာ ပါနော်..။တက်ကြွမှု တွေ နဲ့ အမြဲ လန်းဆန်း နေ ပြီး ချစ်စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ ပြည်သူ့ အချစ်တော် လေး ပိုပိုကို တော့ မချစ် ဘဲ မနေနိုင် အောင် အချစ်ပို နေကြမှာ မို့ အသည်း လေး တွေ ပေးသွား ကြ ဖို့ မမေ့ပါ နဲ့ ဦးနော်…။
source : Po Po’s fb Acc
ပရိသတ္ ေတြ ရဲ့ အခ်စ္ေတာ္ အဆိုေတာ္ မ ေလး ပိုပို က ေတာ့ ပရိသတ္ ေတြ အႀကိဳက္ေတြ႕ ေစတဲ့ သီခ်င္းေကာင္း ေလး ေတြ မ်ားစြာ ထြက္ရွိ ထား ၿပီး လက္ရွိ မွာ လည္း သီခ်င္းေလး ေတြ ဆက္တိုက္ လုပ္ေဆာင္ ေန ပါ တယ္ေနာ္..။ သီခ်င္းေလး ေတြ ကို ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီး ေရးစပ္ ကာ အသံခ်ိဳခ်ိဳ ေလး နဲ႔ ေဖ်ာ္ေၿဖ တတ္ တဲ့ ပိုပို က ေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္း မွာလည္း ပရိသတ္ ေတြ ကို အခ်စ္ ပိုေစ သူေလး လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ေနာ္..။
Tik Tok ဗီဒီယိုေလး ေတြ ကို လည္း မၾကာ ခဏ ေဆာ့ကစား တတ္ တဲ့ ပိုပို က ေတာ့ ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ အျမဲ မၽွေဝ ေလ့ရွိ သ လို အခုတစ္ခါ မွာ လည္း သူမရဲ့ ခ်စ္စရာ Tik Tok Video ေလး ကို ေဝမၽွ ထား ပါ ေသး တယ္ ေနာ္..။ သူမ ရဲ့ လႈပ္ရွားမႈ ေလး ေတြနဲ႔ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလး ေတြ ကို အျမဲမၽွေဝ တတ္ တဲ့ ပိုပိုက ေတာ့ အခု တစ္ခါ မွာ လည္း အထာ က်က် အမိုက္စား ေလး ဓာတ္ဖမ္း ထား တဲ့ သူမ ရဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြ နဲ႔ ဖမ္းစား လိုက္ျပန္ ပါ တယ္ေနာ္..။
“ Red. . . ” ဆိုၿပီး သူမ ရဲ့ ညိဳ႕အားျပင္း အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလး ေတြ ကို ပိုပို က ခ်စ္ ပရိသတ္ ေတြ ကို ေဝမၽွ ထား တာ ျဖစ္ ၿပီး ပရိသတ္ ေတြလည္း သေဘာက် ေနၾက မွာ ပါေနာ္..။တက္ႂကြမႈ ေတြ နဲ႔ အျမဲ လန္းဆန္း ေန ၿပီး ခ်စ္စရာ ေကာင္းလြန္း တဲ့ ျပည္သူ႔ အခ်စ္ေတာ္ ေလး ပိုပိုကို ေတာ့ မခ်စ္ ဘဲ မေနနိုင္ ေအာင္ အခ်စ္ပို ေနၾကမွာ မို႔ အသည္း ေလး ေတြ ေပးသြား ၾက ဖို႔ မေမ့ပါ နဲ႔ ဦးေနာ္…။
Previous post အကြိမ်ကြိမ်ပြန်ကြည့်ချင် လောက်အောင် ဆက်ဆီ ကျကျ နဲ့ အမိုက်စား ဖြစ်နေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး သန္တာဗိုလ်
Next post ကြည့်ရှူသူတိုင်း ရင်တလှပ်လှပ်ဖြစ်သွားစေမယ့် ချောကလျာရဲ့ အလန်းစား TIK TOK ဗီဒီယိုဖိုင်လေး